ဒီအချက်တွေကို သင့်ချစ်သူက လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကို မချစ်တော့ပါဘူး •
ဒီအချက်တွေကို သင့်ချစ်သူက လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကို မချစ်တော့ပါဘူး
03/12/2019 Yan Naing Life Style 0
မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရည်းစားတွေ ပြောင်းလဲသွားရင် ခံစားရပါတယ်။ သူတို့ကို မချစ်တော့ဘူးလို့ သိလိုက်ရတဲ့အခါ အတော်ကို ထိခိုက်ခံစားရပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို ပျော်ရွှင်စေမယ့်သူ၊ အမြဲဂရုစိုက်ပေးမယ့်သူကို လိုချင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
အလုပ်တွေ ဘယ်လိုပဲများများ၊ ဘယ်လိုပဲအရေးကြီးကြီး ယောက်ျားလေးတွေဘက်က ဂရုစိုက်ရမယ်၊ ဦးစားပေးရမယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ကို လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ သဘာဝနိယာမပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အရာရာပြောင်းလဲသွားတာကို လူတွေ မကြိုက်ကြပါဘူး။ ချစ်သူရည်းစားတွေဆိုရင် ပြောင်းလဲတာကို ပိုတောင်မကြိုက်ကြပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေမှာ ဆဌမအာရုံရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် သူတိူ့ချစ်ရသူရဲ့ အပြုအမူပြောင်းလဲတာတွေကို ချက်ချင်းပဲ အဖြေရှာကြပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာရင်တော့ မချစ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်မလဲ။ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
သကြားများရင် အရသာပျက်ပါတယ်။ Relationship မှာလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ သင့်ချစ်သူက သင့်ကို ပိုဂရုစိုက်ပြမယ်၊ ပိုချစ်ပြမယ်၊ ပိုပြီးသည်းသည်းလှုပ်ပြမယ် ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာဆိုတာ သေချာပါပြီ။
2. သင်ဖုန်းခေါ်ရင် ဂရုမစိုက်ဘူး။
သင့်ချစ်သူက သင်ဖုန်းစခေါ်တာကိုပဲ နာရီပေါင်းများစွာ စောင့်နေတတ်သူလား။ သင်ဖုန်းခေါ်လာတာကို စပြီး ရှောင်နေပြီလား။ ဒီအချက်တွေ စလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူကို စစ်ဆေးဖို့လိုလာပါပြီ။သင့်ကိုလျစ်လျူးရှုတယ်ဆိုတာ သူ့မှာ ပိုအရေးကြီးတဲ့သူရှိနေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။
တချို့အရာတွေကို သင့်ကို မပြောပြဘဲ ဖုံးကွယ်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အရာတွေကို သင်သိသွားပြီး လုံးဝခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့အခါမှ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကို ဖုံးကွယ်ထားတာတွေ ရှိပြီဆိုကတည်းက မချစ်တော့တာပါ။ Relationship ဆိုတာ ယုံကြည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ရတာပါ။ သင့်ချစ်သူက ဖုံးကွယ်တတ်လာရင်တော့ မယုံပါနဲ့တော့။
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင်တို့အချစ်တွေက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။
ဒီအခကျြတှကေို သငျ့ခဈြသူက လုပျနပွေီဆိုရငျတော့ သငျ့ကို မခဈြတော့ပါဘူး
မိနျးကလေးတှကေ သူတို့ရညျးစားတှေ ပွောငျးလဲသှားရငျ ခံစားရပါတယျ။ သူတို့ကို မခဈြတော့ဘူးလို့ သိလိုကျရတဲ့အခါ အတျောကို ထိခိုကျခံစားရပါတယျ။ မိနျးကလေးတှကေ သူတို့ကို ပြျောရှငျစမေယျ့သူ၊ အမွဲဂရုစိုကျပေးမယျ့သူကို လိုခငျြကွတာပဲဖွဈပါတယျ … ။
အလုပျတှေ ဘယျလိုပဲမြားမြား၊ ဘယျလိုပဲအရေးကွီးကွီး ယောကျြားလေးတှဘေကျက ဂရုစိုကျရမယျ၊ ဦးစားပေးရမယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ခဈြသူက ဒီအခကျြတှထေဲက တဈခကျြကို လုပျနပွေီဆိုရငျတော့ သငျ့ကိုမခဈြတော့ဘူးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
ပွောငျးလဲတယျဆိုတာ သဘာဝနိယာမပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အရာရာပွောငျးလဲသှားတာကို လူတှေ မကွိုကျကွပါဘူး။ ခဈြသူရညျးစားတှဆေိုရငျ ပွောငျးလဲတာကို ပိုတောငျမကွိုကျကွပါဘူး။ မိနျးကလေးတှမှော ဆဌမအာရုံရှိတယျလို့ ယုံကွညျကွပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ သူတိူ့ခဈြရသူရဲ့ အပွုအမူပွောငျးလဲတာတှကေို ခကျြခငျြးပဲ အဖွရှောကွပါတယျ။ ဒီလိုပွောငျးလဲမှုတှေ ရှိလာရငျတော့ မခဈြဘူးလို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။ ဘယျလိုပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈမလဲ။ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။
သကွားမြားရငျ အရသာပကျြပါတယျ။ Relationship မှာလညျး အဲဒီလိုပါပဲ။ သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို ပိုဂရုစိုကျပွမယျ၊ ပိုခဈြပွမယျ၊ ပိုပွီးသညျးသညျးလှုပျပွမယျ ဆိုရငျတော့ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ လက်ခဏာဆိုတာ သခြောပါပွီ။
2. သငျဖုနျးချေါရငျ ဂရုမစိုကျဘူး။
သငျ့ခဈြသူက သငျဖုနျးစချေါတာကိုပဲ နာရီပေါငျးမြားစှာ စောငျ့နတေတျသူလား။ သငျဖုနျးချေါလာတာကို စပွီး ရှောငျနပွေီလား။ ဒီအခကျြတှေ စလုပျပွီဆိုရငျတော့ သငျ့ခဈြသူကို စဈဆေးဖို့လိုလာပါပွီ။သငျ့ကိုလဈြလြူးရှုတယျဆိုတာ သူ့မှာ ပိုအရေးကွီးတဲ့သူရှိနပွေီဆိုတဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။
တခြို့အရာတှကေို သငျ့ကို မပွောပွဘဲ ဖုံးကှယျထားပါလိမျ့မယျ။ ဖုံးကှယျထားတဲ့ အရာတှကေို သငျသိသှားပွီး လုံးဝခှငျ့လှတျလို့မရတဲ့အခါမှ ပွောပွပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ကို ဖုံးကှယျထားတာတှေ ရှိပွီဆိုကတညျးက မခဈြတော့တာပါ။ Relationship ဆိုတာ ယုံကွညျမှုနဲ့ တညျဆောကျရတာပါ။ သငျ့ခဈြသူက ဖုံးကှယျတတျလာရငျတော့ မယုံပါနဲ့တော့။
ဒီအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီနရေငျတော့ သငျတို့အခဈြတှကေ တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ မှေးမှိနျပြောကျကှယျသှားပါပွီ။
အချုပ်ကားနှင့် ဆိုင်ကယ် တိုက်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း
Total Hits : 1247830